Xoogaga Tigrayga oo weeraray deegaano ka tirsan Gobolka Canfarta – Radio Daljir
Xoogaga Tigrayga oo weeraray deegaano ka tirsan Gobolka Canfarta
Luulyo 20, 2021 7:39 b 0
Afhayeen u hadlay Maamulka Canfarta ayaa sheegay in xoogaga ka soo jeeda waqooyiga Tigray ee waqooyiga Itoobiya ay weeraro ka gaysteen gobolka ay jaarka yihiin ee Canfarta.
Dagaalyahanada Tigreega ayaa u gudbay Canfarta sabtidii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa ay dagaal la galeen ciidamo daacad u ah Maamulka Canfarta sida uu sheegay afhayeenka Canfarta Ahmed Koloyta.
Afhayeen u hadlay ciidamada Tigreega Getachew Reda ayaa xaqiijiyay inay ka dagaalamayaan gudaha magaalada Canfarta balse waxa uu sheegay inaysan dooneyn in dhul ay leeyihiin Canfarta ay la wareegaan.
Canfarta istiraatiijiyad ahaan waa muhiim maxaa yeelay wadada iyo tareenka isku xira caasimada Addis Ababa iyo dekedda badda ee Jabuuti ayaa mara.
Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay ayaa Isniintii sheegay in kolonyadooda oo ka kooban sagaal gaari xamuul ah la weeraray subaxnimadii Axadda xilli ay gargaar u wadeen Tigray.
Kolonyada ayaa lagu weeraray 115 km (70 miles) oo u jirta magaalada Semera ee Canfarta, wakaaladda ayaa sheegtay. in WFP ay hakisay dhaq dhaqaaqii dhamaan kolonyadii ka socotay Semera.
Kumanaan qof ayaa ku dhimatay colaada Tigray ilaa iyo hadda, qiyaastii 2 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda in ka badan 5 milyanna waxay ku tiirsan yihiin gargaar cunto oo deg deg ah.
Hoggaamiyaasha kooxda TPLF ayaa sheegay inay dagaalka sii wadayaan ilaa ay dib ula wareegayaan gacan ku haynta dhulka lagu muransan yahay ee koonfurta iyo galbeedka Tigreega, kaas oo ay ku qabsadeen dagaalladii ay kula jireen xulafada dawladda ee ka soo jeeda gobolka Amxaarada.
Axadii, Abiy wuxuu sheegay in militariga Itoobiya ay u diyaar garoobeen inay ka adkaadaan xoogagga Tigreega.
Ciidamada ka socda gobolka Amxaarada oo muran dhanka xuduuda ah uu kala dhaxeeyo Tigreega ayaa taageerayay militariga tan iyo markii uu bilaawday khilaafka. Jimcihii, seddex gobol oo kale ayaa sheegay inay dirayaan ciidamo taageera ciidanka. Akhri wax dheeraad ah
Axadii, deegaanka Soomaalida wuxuu sheegay inuu sidoo kale dirayo ciidamo, si lamid ah gobolka Benishangul-Gumuz Isniintii. Gobollada Gambella iyo Harari ayaa sidoo kale sheegay inay dirayaan ciidamo, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Itoobiya.
Xasan Sheekh “Waxaan ku baaqayaa in wixii lagu heshiiyay la fuliyo”
Sidee looga ciiday maanta wadamada Islaamka?